आज र भाेलि भिटामिन ए कार्यक्रम सञ्चालन स्पेसखबर
मादक पदार्थ नियमितलाई भन्दा कहिलेकाहीँ पिउनेलाई बढी असर : अध्ययन के तपाईं नियमित मादक पदार्थ सेवन गर्नुहुन्छ ? कि कहिले कहिले मात्रै गर्नुहुन्छ ? यदि तपाईंको उत्तर कहिलेकाहीँ पिउँछु र पिएको बेलामा धेरै पिउँछु भन्ने आयो भने त्यो गलत ...
कमसल खानाले सानैमा मोटोपना नेपालमा ५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका १३ जनामध्ये १ जनामा मोटोपनाको समस्या छ। प्रतिवेदनअनुसार बढी तौल र मोटोपना आर्थिक अवस्था र घरको खाद्य सुरक्षासँगै बढ्ने गर्दछ। सम्पन्न र ...
दसैंमा मासु त खाने, तर कसरी ? हामी हर्सोल्लासका साथ दसैं पर्व मनाइरहेका छौं । आज विजया दशमी भए पनि कहीं-कहीं त पूर्णिमासम्मै टीका-जमरा लगाइ मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने चलन पनि छ । वर्षदिनको चाडमा मीठो खाने ...
खुसी चाहियो तर कसरी ? मानिसको जीवनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै खुसी हो । सबै आफ्नो जिन्दगी खुसीमै जीउन चाहन्छन् । जहाँ तिनीहरु सधैं खुसी रहन सकून् र कुनै दुःख, चिन्ताले नछोओस् । तर, ...
दशैंकाे खानपानमा ध्यान दिन सुझाव दशैं भन्नेबित्तिकै आफूभन्दा ठूला मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने र अत्यधिक खानपान गर्ने चाडका रूपमा लिइन्छ तर आशीर्वादसँगै अत्यधिक बढी मदिरा, मासु तथा अन्य परिकार खाने चाडका रूपमा दशैं मनाउँदा स्वास्थ्यमा ...
दसैं बिदामा पनि स्वास्थ्य संस्था खुल्ने दसैं-तिहारजस्ता पर्वमा पनि विगतका वर्षमा जस्तै स्वास्थ्य संस्थाहरु खुल्ने भएका छन् । बिदामा पनि स्वास्थ्य सेवा पाउँदा सर्वसाधारणलाई सहज हुने भएको छ ।
बिदामा के गर्ने ? आजदेखि दसैं सुरु भइसकेको छ । घटस्थापनासँगै दसैंको विधिवत सुरुवात भएको मानिन्छ । पहिले सरकारी कार्यालयहरु पनि ५ देखि १० दिनसम्म बिदा रहन्थे । अहिले बिदा घटेर ३/४ दिनमा ...
हेल्थ टिप्स पेटमा ग्यास भरिएर हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस् मानिसको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनसँगै खानपिन पनि बदलिएको छ । अहिले त झन् चाडबाडको मौका पनि छ । चाडबाडमा हामीले धेरै मसला हालेको खाना खाने गर्छौं । यसले गर्दा शरीरमा ...
निद्रा लागेन ? यसो गर्नुस् १ मिनेटमै फुस्स आधुनिक जीवनशैलीका कारण राम्रो निद्रा के-हो भन्ने मानिसले भुलिसकेका छन् । अधुरो निद्रा नै आजभोलिका मानिसको यथार्थ हो । निद्रा नपुग्दा स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर गर्छ । यसर्थ निद्रा ल्याउन ...
स्वास्थ्यका कुरा मदिरासँग यी कुरा त खानै हुँदैन ! हुन त मदिरा पिउनु रोग निम्त्याउनु हो । तैपनि आजभोलिका मानिसमा यसको सेवन फेसनैझैं बनेको छ । अनि मदिरासँग सितनका रुपमा पिनट्स, भुटेको काजु, चिप्स, पनिर वा सलाद खाने ...
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल सार्वजनिक बिदामा पनि ओपीडी खुला डेंगु परीक्षणका लागि भन्दै काठमाडौंको टेकुमा रहेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले बिदामा पनि ओपीडी र फिबर क्लिनिक खुला राखेको छ ।
थपिँदै डेंगुका बिरामी, जोगिन यस्ता उपाय अपनाउनुस् गएको साउनयता पाल्पामा डेंगुका ५ बिरामी देखिएका छन् । साउनमा २ बिरामी फेला परेकोमा भदौमा ३ बिरामी थपिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी माधव ज्ञवाली बताउँछन् ।
किन जटिल मानिन्छ मिर्गौला उपचार ? प्रधानमन्त्री केपी ओली आज (शुक्रबार) मात्रै मिर्गौला उपचार गरी सिंगापुरबाट फर्किएका छन् । मुलुकका कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई लिएर विभिन्न चर्चा-परिचर्चा भइरहेका छन् ।
तराईदेखि पहाडसम्मै डेंगु संक्रमण : राजधानीसमेत जोखिममा, डाक्टर-नर्स पनि संक्रमित बर्खाको मौसम । अहिले देशभर विभिन्न रोगको संक्रमण देखिएको छ । सर्पदंश, झाडापखाला, ज्वरोसँगै डेंगुका रोगी पनि बढ्दै गएको पाइएको हो ।